Lalao Ravalomanana : izay hitoerany sy lalovany dia mamerovero . – MyDago.com aime Madagascar
Lalao Ravalomanana : izay hitoerany sy lalovany dia mamerovero .
Nitohy tetsy amin’ny FJKM Ambatoroaka finoana androany ny fiaraha-mivavaka ho an’ny firenena sy ny fianakaviana Ravalomanana. Ny mpitandrina izay namaky ny tenin’ny soratra masina dia nanambara fa kristy ihany no afaka hanafaka ny krizy izay mampikaikaika ny vahoaka Malagasy izao . Nanakoako tamin’izany ny hira “Fitiavana rano velona” sy ny fifandraisan-tànana ho marika fa tokony hifankatia ny rehetra. Anisany nisongadina tamin’ny fandraisam-pitenenana izay nataon’I Ramatoa Lalao Ravalomanana ny famporisihana ny vahoaka Malagasy hanavao isan’andro ny fanolora-tena sy ny famelan-keloka . Nohamafisiny fa raha izy manokana dia mamela heloka ny rehetra sy tsy manana alahelo na dia ny nanao ratsy taminy aza ka tokony hanao izany ihany koa isika hoy izy. Tsy adinon’ity farany ihany koa ny nankasitraka ny vahoaka Malagasy tamin’ny fitondrana amam-bavaka ny fianakaviany hatramin’izay.Nambarany fa raha tsy nisy ny famelankeloka dia tsy handroso izao firenena Malagasy izao. Tomefy olona daholo ny sisin’arabe izay lalovany taorian’ny fotoam-bavaka izay niaraka nihoby sy hofahofa tànana izay manambara sahady fa mamim-bahoaka sy ao am-pon’ny Malagasy I Ramatoa Lalao Ravalomanana . Miandradra azy hanarina sahady izao firenena latsaka anaty krizy lalina izao araka ny ambetiteniny fa vonona ny hanarina ny rava izy .Izany tokoa no tonga amin’ilay fiteny hoe : Sambatra izay hitoerany fa ny lalovany aza mamerovero .
Nampita hafatra Lalao Ravalomanana !
3 pensées sur “Lalao Ravalomanana : izay hitoerany sy lalovany dia mamerovero .”
16 mai 2013 à 6 h 51 min
Lasa izao ary tsy mahazo mihemotra intsony. Tsy maintsy avotana ny tanindrazana.
Mba henoy dit :
Tena mahafinaritra ahy ny zavatra lazainao Ramatoa Lalao Ravalomanana. Saingy misy zavatra tiako tsindriana kely sady mafy. « Neny » ny anarana nentinao @ malagasy. Aoka re mba hisongadina tsara ny tena dikan’ilay reny, aza mitsikera ny hafa intsony, mahaiza manambatra ny malagasy rehetra. Ny tena tsara aza dia efa miseho miaraka @ malagasy avy @ faritra hafa rehetra mba tena ho fantatry ny olona izany reny. Tsy ho seho ivelany na titre fotsiny fa tena hambabon’ny fon’ny malagasy e. Reny, inona ny tena dikany : be fitiavana.
Mba asondroty re itony ry Ramatoa Hajaina
Précédent Article précédent : Lettre ouverte à ceux qui n’ont pas vu … (rencontre avec le parti Vert)
Suivant Article suivant : RAVALOMANANA MARC : Rehefa mandresy i Neny dia mandresy isika !